Posted by Tranquillus | Jan 18, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Liiskaaga mushaarka ayaa kuu oggolaanaya inaad qiil u hesho dakhligaaga. Lagama maarmi karo noloshaada maamul, dukumintigan waa mid aad muhiim u ah. Waxay kaa caawinaysaa inaad muujiso tirada sannadaha aad shaqaysay. Waxaa loo isticmaalaa in lagu hubiyo in wax kasta oo aad xaq u leedahay lagu siiyay adiga. Sidaa darteed waa caddeyn muhiim ah oo ay tahay inaad ilaaliso nolosha. Luminta ama helitaan la'aantu waxay yeelan kartaa cawaaqib xumo. Waa inaad, haddii aysan ku soo gaarin waqtigeeda, inaad isla markaaba ka jawaabto oo aad dalbato in lagu soo wareejiyo.
Waa maxay warqadda mushaarku?
Adiga iyo loo shaqeeyahaaga caadiyan waxaad kuxirantahay heshiis shaqo oo rasmi ah. Shaqada aad maalin walba siiso waa la siiyaa. Adoo raacaya sharciga jira, waxaad mushaarkaaga kuhelaysaa xilliyo adag. Badanaa mushaar ayaa lagaa siiyaa bil kasta. Ku wajahan bilawga ama dhamaadka bil kasta.
Liiska mushaharku wuxuu si faahfaahsan u qeexayaa dhammaan lacagaha lagu siiyay muddadan. Sida ku xusan qodobka R3243-1 ee Xeerka Shaqaalaha, war-bixinta waa inay ku jirtaa saacadaha aad shaqeysay, saacadahaaga dheeriga ah, maqnaanshahaaga, fasaxyadaada la bixiyo, gunooyinkaaga, faa'iidooyinkaaga nooc, iwm.
Qaab noocee ah ayaa lagu helaa?
Sababtoo ah habka casriga ah ee hadda jira, bixinta lacag bixinta ayaa caadi ka noqotay shirkadaha Faransiiska. Heerkan ayaa hadda laga aasaasay Faransiiska. Sidaa darteed waa suurtagal in la helo nooc la habeeyay ama qoraal kombuyuutar ah oo ku qoran war-murtiyeedkan.
Sida ku xusan qodobka L3243-2 ee Xeerka Shaqaalaha, shaqaaluhu wuxuu xaq u leeyahay inuu ka horyimaado nidaamkan wuxuuna dooran karaa inuu sii wado helitaanka warqadiisa mushaharka oo qaab qoraal ah.
Sidoo kale waa inaad ogaataa in loo-shaqeeyahaaga lagu ganaaxi doono 450 euro haddii uusan kuu keenin warqaddaada mushaarka. Lacagtaan ayaa loo oggol yahay fayl kasta oo aan la soo gudbin. Waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa magdhowga iyo dulsaarka sababo la xiriira bixinta warqadda mushaarka. Xaqiiqdii markii shaqaaluhu awoodi waayey inuu helo dheefaha shaqo la'aanta ama amaahda bangiga loo diiday. Qof baa qiyaasi kara inuu isu arko inuu yahay qof la dhibaateeyey iyo inuu go'aansaday inuu kiiskiisa u gudbiyo maxkamadda.
Sidee loo helaa warqaddaada mushaarka?
Habka ugu fudud ayaa ah inaad codsi qoraal ah ugu dirto waaxda ay quseyso shirkaddaada. Waa kuwan laba warqadood oo muunad ah oo aad ku kalsoon tahay.
Tusaalaha ugu horeeya: sheybaarka warqada mushaarka oo aan la bixin
Ujeeddo: Codsi warqad mushahar ah
Waa inaan kuu soo qoraa si aan dareenkaaga ugu soo jeediyo dhibaatada aan hadda la kulmayo.
In kasta oo dhawr xusuusin oo hadal ah aan u diray maareeyuhayga weli ma aanan helin warqaddaydii mushaharka ee bishii ugu dambaysay illaa maanta.
Tani dhab ahaan waa kormeer soo noqnoqday oo dhankiisa ah, laakiin dhammaystirka habraacyada maamulka qaarkood. Dukumiintigaan ayaa muhiim ii ah dib udhacaasina wuxuu ii horseedayaa waxyeelo weyn.
Tani waa sababta aan ugu oggolaado naftayda inaan ka codsado faragelinta tooska ah ee adeegyadaada.
Aniga oo mahadsan diirran, fadlan aqbal, marwo, salaanteyda ugu sarreysa.
READ Ujeedo wax ku oolnimada adoo si fudud u qoraya!
Xalalka kala geddisan haddii ay dhacdo luminta jeegaaga mushaharka
Codso nuqul. Tani waa habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee lagu helo nuqulo cusub oo ku saabsan warqadahaaga lacag-bixinta. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad la xiriirto loo-shaqeeyahaaga si aad uga codsato inay ku siiyaan nuqul ka mid ah dukumintiga la sheegay. Waaxda maamulka shaqaaluhu waxay markaa ku siin kartaa nuqul ka mid ah kuwa aad lumisay.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad sidoo kale ogaataa inuusan jirin sharci ku waajibinaya loo-shaqeeyahaaga inuu soo saaro nuqul dukumiintiyadan ah. Tani kuma qorna sharciga shaqada. Tan darteed, wuu diidi karaa codsigaaga. Tanina xitaa haddii qodobka L. 3243-4 uu ku waajibinayo loo-shaqeeyahaaga inuu haysto nuqul ka mid ah warqaddaada lacag-bixinta ugu yaraan muddo 5 sano ah. Sidaa darteed, waa inaad hubisaa inaad adeegsanayso codka saxda ah ee ku jira boostadaada haddii aad u baahato inaad codsato nuqullo.
Tusaalaha labaad: template ah codsi nuqul ah
Ujeeddo: Codsiga waraaqaha mushahar luminta
Kadib markaan xaal mariyey waraaqahayga dhowaan. Waxaan ogaaday inaan ka maqnaa dhowr warqadood oo lacag bixin ah. Waxaan u maleynayaa inay iga luntay intii aan ku guda jiray howsha ay ahayd inaan ku qabto howlaha bulshada dhowaan.
Dukumiintigani hore ayuu ii anfici jiray wuuna ka sii fiicnaan doonaa marka la gaaro waqtiga aan sheeganayo xuquuqdayda hawlgabnimada.
Taasi waa sababta aan halkan ugu ogolaado inaan halkan kuu soo qoro si aan u ogaado, haddii ay suurta gal tahay, adeegyadaadu waxay i siin karaan labalaab .. Kuwaani waa waraaqaha bixinta bilaha laga bilaabo [bil] illaa [bil] sanadka hadda jira .
Waa mahadnaq weyn oo aan kaa codsanayo inaad aqbasho, Marwo, salaan xushmad leh.
Maxay yihiin dukumiintiyada kale ee taageeraya ee aan isticmaalayo?
Maaddaama shirkaddaadu aysan kuu soo gudbin nuqul (yada), waxaad mar walba weydiisan kartaa caddeyn caddeynaysa muddadii aad soo shaqeysay. Shahaadadan mushaharku waa sida ay ansax u tahay marka loo eego sharci iyo maamul. Shahaadada shaqada ayaa waliba samayn karta khiyaamada.
Hadday waligaa, qaababkan, weli u helin raadinta mushaarkaaga, xalka waxaa laga heli karaa bangigaaga. Qoraalladaada bangiga waxay si faahfaahsan uga hadlayaan wareejinta aad ka heshay cidda aad u shaqayso. Waxaad ka heli kartaa diiwaanadan maamulaha koontadaada. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad kubilaabato codsiga codsi qoraal ah. Adeeggan badanaa waa la bixiyaa.
Soo dejiso "Tusaalaha-tusaalaha-u-lacag-bixinta-warqad-bixin-ah-ma-bixin.docx"	Premier-tusaale-moodle-ku-shub-warqad-aan-geyn.docx - Soo degsaday 4307 jeer - 15 Kb
Soo dejiso "Second-example-model-for-a-nuqul-request.docx"	Laba-tusaale-moodle-ku-shub-une-demande-de-duplicata.docx - Soo degsaday 3893 jeer - 16 KB
Template Waraaq si aad u codsato inaad hesho warqadaada mushaarka Janaayo 8th, 2022Tranquillus
horeAdeegso waxqabad qayb ahaan muddada dheer ah oo ku saleysan heshiiskooda wadajirka ah
socdaTemplate warqad si aad u dalbato bixinta mushaharkaaga oo aan la bixin